भेरीमा बल्ल न्यूरो सर्जन – sunpani.com
भेरीमा बल्ल न्यूरो सर्जन
सुनपानी । ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जले न्यूरो सर्जन डाक्टर पाएको छ । डा. हरि पौडेल आएपछि अस्पतालले न्यूरो सर्जन पाएको हो ।
टाउकोमा चोट लागेका बिरामीले अब भारतको लखनऊ र काठमाडौं गएर महंगोमा सेवा लिन नपर्ने भएको हो । सरकारी अस्पतालमा चितवन पश्चिम न्यूरो सर्जन डाक्टर थिएनन् । निजी अस्पतालमा थिए ।
दुर्घटना, रुखबाट लड्दा, इट्टा अथवा गहु्रंगो वा धारिलो हतियारले टाउकोमा चोट लागेका बिरामीलाई न्यूरो सर्जन डाक्टरले हेर्छन् । साविकको मध्य र सुदूरपश्चिमको रिफरल सेन्टर मानिने भेरी अस्पतालमा त्यो सुविधा नहुँदा बिरामीलाई भारतको लखनऊ वा काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता थियो । न्यूरोका बिरामीलाई समयमा उपचार दिनु पर्छ । चिकित्यकीय भाषामा समयमा अस्पतालमा पु¥याएर उपचार गर्नुलाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ । भेरीमा न्यूरो सर्जन नहुँदा गोल्डेन आवरमा बिरामीले उपचार पाएका थिएनन् । अब पाउने भएका छन् ।
डा. पौडेल भेरीमा आएको दुई महिना भयो । यो बीचमा उहाँले आधा दर्जन अप्रेसन गरिसक्नु भएको छ । चार दर्जन बिरामीको उपचार गरिसक्नु भएको छ । डा. पौडेलका अनुसार, न्यूरोका बिरामीले चाडो उपचार पाउनु पर्छ । जति छिटो उपचार पाए त्यति नै राम्रो हुन्छ ।
भेरीमा न्यूरो सर्जन छन् भन्ने प्रचार हुन सकेको छैन । सरकारी अस्पतालमा न्यूरोको सेवा लिन पाउदा बिरामीलाई सस्तो पर्ने गर्दछ । डा. पौडेलले भेरीले न्यूरोमा अरु ठूला अस्पतालको जस्तै सेवा दिन सक्ने बताउनुभयो ।
धरानबाट एमबीबीएस, भारत चण्डीगढबाट एमएस सर्जरी, बीर अस्पतालबाट एमसीएच न्यूरो सर्जरी गरेका डा. पौडेलको उपस्थितिले भेरी अस्पतालको गरिमालाई बढाएको छ ।